राजधानीमा मृगौलाका बिरामीको चाप, डायलसिस गर्न पालो पर्खिनुपर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका अस्पतालमा मृगौलाको डायलसिस गर्ने बिरामीको चाप बढेको छ । जिल्ला अस्पतालहरुले मृगौलाको डायलसिस गर्ने बिरामीलाई काठमाडौं रिफर गर्दा यहाँ चाप बढेको हो ।
यहाँको सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पतालमा मृगौलााको डायलसिस गर्न दैनिक नयाँ तथा पुराना ३० देखि ४० जना बिरामी आउने गरेका छन् । अस्पतालको क्षमता पनि कम भएकाले आएका सबै बिरामीलाई सेवा दिन नसकिएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालमा हरेक दिन ८ जनासम्म नयाँ बिरामीले सेवा लिन आउने गरेका तर तिनिहरु सबैलाई सेवा दिन नसकिएको अस्पतालका निर्देशक डा. भुपेन्द्र बस्नेतले बताए ।
“सरकारले मृगौलाको डायलसिस र प्रत्यारोपण निःशुल्क गरेपछि बिरामीको चाप झनै बढेको छ । थैरै अस्पतालमा १२ वटामात्र हेमोडायलसिस मेसिन भएका कारण मृगौलाको उपचार लिन आएका सबै बिरामीलाई सेवा दिन सकिएको छैनन,” उनले भने, “अस्पतालमा २५ वर्षदेखिका पुराना बिरामी छन् । पुराना बिरामी नहटेसम्म नयाँ बिरामीलाई भर्ना लिन नसकिने अवस्था छ ।” वीर अस्पतालमा जाईकाको सहयोगमा बन्दै गरेको नयाँ भवन १६ महिनापछि निमार्ण कार्य सम्पन्न्न भएपछि अन्य मृगौलाका बिरामीका लागि २५ वटा बेड र उपकरण सेवा थपिने अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालकी नेफ्रोलोजी विभागकी प्रमुख डा. रजनी हाडाले दैनिक ४० बिरामीको नियमित मृगौलाको डायलसिस गनुपर्ने र ५ जना बिरामी थपिने बताइन् । “ हाल एउटा उपकरणले दैनिक दुई जनालाई डाइलासिस गरिरहेको छ । २० वर्ष पुरानो मेसिनले ढिलो काम गर्ने र लामो समयसम्म लाग्ने हुँदा धैरैलाई सेवा दिन नसकिएको हो,” उनले भनिन्, “बेड अभावका कारण अल्पकालिन बिरामीलाई अन्य सरकारी अस्पतालमा रिफर गर्ने गरेको छ । ”
त्यस्तै, भक्तपुरस्थित मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा दैनिक १ सय देखि १ सय ५० जनासम्म बिरामीले डायलसिस गर्ने गरेका छन् । केन्द्रमा हाल ३६ वटा डायलसिस मेसिन तथा उपकरण रहेका छन् । केन्द्रका निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले अहिले अस्पतालमा पर्याप्त उपकरण र विशेषज्ञ भए पनि बेड अभावका कारण आएका सबेै बिरामीलाई सेवा दिन नसकिएको बताए । “अहिले ४० बेड आकस्मिक उपचारका लागि छुट्याइएको छ र अन्य बेडमा बिरामीको चापका कारण सबैलाई सेवा दिन गाह्रो भएको छ,” उनले भने । हालसम्म केन्द्रबाट १ लाख १ हजार ३ सय सयले मृगौलाको डायलसिस सेवा लिइसकेका छन् ।
त्यसैगरी, महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा दैनिक मृगौलाको डायलसिस गर्नुपर्ने खालका बिरामी ५० जनासम्म आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालमा उपकरण अभावका कारण हाल मृगौलाको डायलसिस गनुपर्ने ३ सय जना बिरामी पालो कुरेर बसेका अस्पतालको नेफ्रोलोजी विभाग प्रमुख डा. दिव्या सिंहले बताइन् । “हाल अस्पतालमा नेफ्रोलोजी विभागमा ११ वटा उपकरण रहेका छन्,” उनले भनिन्, “अस्पतालमा बिरामीको चापका कारण भएका ११ वटा मेसिनले सबैलाई समयमा सेवा दिन गाह्रो भएको छ ।”